OwoZalo uthi impilo iyaqhubeka nakuba ephila nesifo | News24
OwoZalo uthi impilo iyaqhubeka nakuba ephila nesifo
Johannesburg - Inkakha yomlingisi uLeleti Khumalo isiphile nesifo iVitiligo - okuyisifo esibulala ama-pigment cells esikhumba bese sishintsha ibala - iminyaka embalwa kanti lesi sifo sesivele sanda nomzimba kuye.
Nakubo lesi sifo iVitiligo sesishintshe indlela abukeka ngayo, uKhumalo uthi ugculisekile ngempilo yakhe ngoba ngeke kumsize ngalutho ukukhathazeka.
OLUNYE UDABA: ULeleti uchaza ngomshado 'onyanyisayo' noNgema
"Lesi sifo sesishintshe indlela engibukeka ngayo kodwa ngikahle. Angifuni impilo yami ibe mayelana nalesi sifo. Nginaso, manje kwenziwenjani? Ngisanguye umlingisi, umama nonkosikazi," kusho lesi sihlabani sikhuluma nabephephabhuku iTrue Love.
Lo mlingisi odlala emdlalweni wakumabonakude Uzalo uthe wathola ngalesi sifo ngesikhathi eneminyaka engu-24 ubudala nokuthi sivela emndenini kababa wakhe.
"Ngesikhathi ngizama ukuthola abantwana, udokotela wangitshela ukuthi lesi sifo sisazokwanda. Angibanga nankinga ngakho," kuqhuba uKhumalo.
Thola udaba oluphelele kuDrum.